Tun Tun's Photo Diary: Cameron Highland, Malaysia #3 (BOH Tea Centre)
Beautiful BOH tea centre, on the edge of the mountain.
ပထမဆုံး Half day tour ရဲ. နောက်ဆုံး နေ၇ာ ဖြစ်တဲ့ BOH tea centre ကိုေ၇ာက်ပါပြီ။ ကားပေါ်က ဆင်းဆင်းချင်း ဟောဒီ တောင်ပေါ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ လက်ဖက်၇ည် (သို.) စားသောက်ဆိုင်ကို အ၇င် တွေ.၇ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ နေ၇ာက အ၇မ်းကို သာယာပြီး အင်မတန် စိတ်ကူးကောင်းတယ်လို. ထင်မိတယ်။ မုန်.စား၇င်း ဟောဒီ လက်ဖက်ခင်းတွေ နဲ. ပြည့်နေတဲ့ တောတောင်တွေ ကို ကြည့်ရနေတာ အရမ်းကို ဇိမ်ရှိပါတယ်။ အလျှင်မလိုဘူးဆို၇င် ဟောဒီ ဆိုင်မှာ နေ.တ၀တ်လောက် ထိုင်နေလိုက်ချင်တယ်။
I wish I could sit there and enjoy the view for an half day.
စားသောက်ဆိုင် ဘက် ကို မသွားခင် အ၇င် ဆုံး လက်ဖက် စက်ရုံဘက်ကို အ၇င်သွားလေ့လာပါတယ်။ လက်ဖက် အခြောက်ခံတာကနေ ထုတ်ပိုးတဲ့ အထိ အဆင့်အဆင့် လေ့လာလို.၇ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ဖတ်လို.၇အောင် နံ၇ံပေါ်မှာ ကတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ခဲ့ပါတယ်။
We visited to the Tea factory before going to the Tea centre.
လက်ဖက်စက်၇ုံ ဘက်ကို လေ့လာပြီးတော့ BOH tea centre ဘက်ကိုသွားပြီး မုန်.သွားစားပါတယ်။ မုန်.နဲ.လက်ဖတ်၇ည်ပဲ မှာစားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ.ဗြူးကောင်းတဲ့ ၀၇န်တာ ဘက်က စားပွဲတွေက ထိုင်နေတဲ့ သူ အပြည့်ဖြစ်နေတော့ အတွင်း ပိုင်းကနေပဲ ထိုင်ပြီး စားခဲ့၇တယ်။ စား၇င်သောက်၇င်း Tour ကားပေါ်က သြစတြေးလျက လင်မယားနဲ. စကားစမြည်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူ.၇ဲ. အော်စီက လိပ်စာတွေတောင် ပေးသွားသေးတယ်။ ပေးတော့လဲ ယူထားလိုက်တာပေါ့။ :)
ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံက ကြည့်၇င် ဒီလို မြင်၇တယ်။
View from my table. Table with good view were occupied. :(
ဒီနေ၇ာေ၇ာက်၇င် ဘယ်သူမဆို ဒီရူခင်းနဲ. ဓါတ်ပုံရိုက်ကြမယ် လို.ထင်ပါတယ်။ ဘယ်နေ၇ာ ကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် လက်ဖက်စိုက်ခင်းတွေ ချည်းပဲ။
စားသောက်ဆိုင်ကနေ ထွက်လာပြီး မပြန်ခင် car park နားက ၇ူခင်းတော်တော် လှတာနဲ. အဲ့နားမှာ ခဏ ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်ခဲ့တယ်။ Zoom Lens ပါသွားတော့ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်၇တာ အင်မတန် အဆင်ပြေတယ်။ အဝေးကြီးက အဆောက်အဦးတွေကို တောင်ပေါ်ကနေ အေးအေးဆေးဆေး နိုင် ၇ိုက်ခဲ့တယ်။
ဒီပုံလေးကတော့ ဒီပို.စ် တခုလုံးမှာ အကြိုက်ဆုံးပုံပါ။ Foreground ကော Background ကော သူ.ဟာနဲ.သူ perfect ဖြစ်နေတယ် လို. ထင်ပါတယ်။
ဒီတောင်ပေါ်က ရဲတိုက်လို အိမ်ကြီးကို ကျွန်တော် အနီးကပ် သွားကြည့်ချင်တယ်။ ဟိုတယ်လား လူနေအိမ်လား မသိဘူး။ အဲဒီ မှာ နေ၇၇င် ဘယ်လောက်သာယာ လိမ့်မလဲနော်။ ဒါပေမယ့် ညဘက် တိတ်ဆိတ် နေ၇င် ကြောက်စ၇ာ ကောင်းမလားပဲ? :P
Anyone know what is this building? Is thisahotel or resident building? Thank to Tamron 18-270mm lens to get the closer photo of this building from BOH Tea centre.
လှလွန်းလို. ကင်မ၇ာ ခလုပ်ကို တောက်လျှောက်နှိပ် နေတာ ပုံတူတွေ ကို အများကြီး ဖြစ်နေတယ်။ လှလွန်းတော့ လဲ မနေနိုင်ဘူးကိုး။ ဒီတောင် ကမ်းပါးနားက သစ်ပင်ကြီးနေ၇ာမှာ ဗြူးတော်တော်ကောင်းတယ်။ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်၇င် သိပ်လှမှာပဲ။ ဒါပေမ့ယ် ဒီကလေးမ တသိုက်က အကြာကြီး အပိုင်စီးထားလို. အဲ့နားမှာ ဓါတ်ပုံ မ၇ိုက်ခဲ့၇ဘူး။ သူတို. ပုံတွေကိုပဲ ၇ိုက်ခဲ့၇တယ်။း(
ဒါကတော့ Cameron Highland မှာ တွေ.၇တဲ့ ဘက်စကား အ၀ါေ၇ာင်ပါ။ နေ၇ာတော်တော်များများမှာ တွေ.ခဲ့၇တယ်။
ပထမ Half day tour က ဒီလောက်ပါပဲ။ နေ.ခင်း ၂ နာ၇ီလောက်မှာ ပြီးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို.ကို မြို.ထဲကို ပြန်ပို.ပါတယ်။ Seond Half day tour မ၀ယ်တဲ့ သူတွေကိုတော့ ဟိုတယ် ကို ပြန်ပို.တယ်။ကျွန်တော် က ညနေပိုင်း Second Half day tour ၀ယ်ထားတော့ မြို.ထဲက Tour company ရဲ. office မှာ ဆင်းပြီး နောက် tour car လာခေါ်ဖို. တနာ၇ီလောက် စောင့်၇ပါတယ်။ Office က ဈေးနဲ. နီးလို. ဈေးထဲ ခဏ ၀င်ပြီး လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။
After BOH tea center, the last destination of first Half day tour, the tour bus sent us to the city. Those who didn't purchase second half day tour were sent back to their hotels. Then I need to wait about 1 hour for the next tour bus to begin the second half day tour. During that break time, I visited this market near the tour office. You can seealot of souvenir shops selling cloths, pillows and toys with strawberries shapes.
Cameron Highland က စတော်ဘယ်၇ီ နဲ. နာမည်ကြီးတော့ ဈေးထဲက လက်ဆောင် ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ စတော်ဘက်၇ီ ပုံတွေပါတဲ့ အ၇ုပ်တွေ။ အကျီတွေ ။ ခေါင်းအုံးတွေ အများကြီးတွေ.ခဲ့တယ်။
နောက်ပို.စ်ကျ၇င် ညနေပိုင်းမှာ သွားခဲ့တဲ့ Tour အကြောင်းေ၇းပါမယ်။စောင့်ပြီး ဖတ်ကြပါဦး။ Comment တွေချန်ခဲ့သူတွေ ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
at 5/30/2014 11:54:00 PM
Labels: Cameron Highland, Landscape, Malaysia
Please keep on posting. I am reading your page from Canada.
Tun Tun June 2, 2014 at 8:16 PM
Thank you for visiting my blog. Are youaBurmese living in Canada? I want to find out something about Canada from the people who live there. If you don't mind please email me your email address to webmaster@royal-myanmar.com.